Travel restrictions to ease July 5 for fully vaccinated Canadians | Canada Travel News
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka Kanada » Xayiraadaha safarka si loo fududeeyo 5ta Luulyo dadka Kanada ee si buuxda loo tallaalay
Xayiraadaha safarka si loo fududeeyo 5ta Luulyo dadka Kanada ee si buuxda loo tallaalay
On July 5th at 11:59 pm EDT oo si buuxda u tallaashay Kanadiyaanka iyo deganayaasha joogtada ah ayaa laga dhaafi doonaa karantiil huteel iyo karantiil qasab ah oo 14 maalmood ah.
Isbedelada ayaa aad uga hooseeya Warbixinta Gudiga Khabiirka ee Dowlada.
Duulimaadyada waaweyn ee Kanada waxay ku baaqayaan qorshe dib-u-bilaabid ballaadhan oo dib loogu furayo xuduudaha laguna dhammeeyo ogeysiisyo goos goos ah.
Si ka duwan dalal kale oo badan, Kanada wali ma aysan bixin qorshe cad oo dib-u-bilaabid ah
Shirkadaha duulimaadka ee ugu waaweyn dalka Canada ayaa xusey dhawaaqii maanta ee dowlada federaalka ee ahaa 5-ta Julyth at 11:59 pm EDT oo si buuxda u talaashay Kanadiyaanka iyo deganayaasha joogtada ah ayaa laga dhaafi doonaa karantiillada hoteelka iyo karantiil qasab ah oo 14 maalmood ah. Laakiin warshaduhu waxay ku celiyeen codsigoodii ahaa in Kanada ay aad ugu baahan tahay qorshe cad oo dhameystiran oo dib-u-bilaabida safarka caalamiga ah, iyo in la soo afjaro ogeysiisyada hal-billaha ah ee ku saabsan karantiilka iyo isbeddelada siyaasadeed ee xuduudaha.
“Fududeynta xayiraadaha karantiilka ee Kanadiyaanka si buuxda loo tallaalay iyo kuwa safarka ah ee u qalma waa tallaabo loo qaaday dhinaca saxda ah, laakiin waxay aad uga hooseysaa talooyinka ay bixiyeen warbixintii Guddiga La-talinta Khabiirka ee Caafimaadka Kanada oo la sii daayay bishii hore. Dawladdu waxay sii wadaa inay diiddo inay siiso reer Kanada qorshe dib-u-dejin dhammaystiran oo dhammaystiran oo tilmaamaya sida tallaabooyinka looga soo qaadi doono warbixinta. In kasta oo dalal kale sida Faransiiska ay durba beddeleen tallaabooyinkoodii ay ku soo dhaweynayeen socdaalka Kanadiyaanka ah, haddana weli wax qorshe ah ama waqti cayiman ah kuma haysanno Kanada, ”ayuu yiri Mike McNaney, Madaxweynaha iyo Agaasimaha Guud ee Golaha Duullimaadyada Qaranka ee Kanada, oo matala diyaaradaha ugu waaweyn ee Canada (Air Canada) , Air Transat, Jazz Aviation, iyo WestJet).
Warbixinta Guddiga La-talinta Caafimaadka Kanada, oo ay diyaariyeen khubaro ku takhasusay epidemiology, virology iyo sidoo kale falanqeyn xogeed oo horumarsan, waa xog iyo dib u eegis ku saleysan sayniska oo ku baaqeysa isbedelo kala duwan oo ku saabsan safarada iyo tallaabooyinka xuduudaha oo ay ka mid tahay baabi'inta karantiil ee socdaalka si buuxda loo tallaalay, baabi'inta karantiillada huteellada ee dhammaan socotada, yareynta karantiillada qayb ahaan la tallaalo iyo socotada aan la tallaalin, iyo adeegsiga tijaabada antigen degdega ah. In kasta oo Kanada ay gaadhay bartilmaameedka tallaalka ee 75% / 20%, ku dhawaaqista maanta si muuqata ugama hadlin tallaabooyinkan.
McNaney ayaa sidoo kale xusay in shuruudaha dowlada ee ah in caruurta kayar 18 sano ee aan si buuxda loo talaalin ay u hogaansamaan karantiil 14 maalmood ah oo ka hor imanaya habka ay wadamada kale qaateen. “Dowladdu waxay si isdaba joog ah u sheegtaa inay la shaqeyneyso saaxiibadeena caalamiga ah isla markaana ay raaceyso sayniska, hase yeeshee waxay raacdaa dadaallo ay ka mid yihiin karantiil qasab ah oo loogu talagalay carruurta yaryar oo gebi ahaanba ka baxsan talaabooyinka kale. Xaqiiqdii, siyaasaddu waxay si toos ah uga hor imaaneysaa talooyinka ay wadajir u soo saareen 17-kii Juun ee Xarunta Kahortagga iyo Xakamaynta Cudurrada Yurub, iyo Hay'adda Badbaadada Duulista Hawada ee Midawga Yurub ”.
“Si ka duwan dalal kale oo badan oo ay ka mid yihiin kuwa aan la shaqeyno ee G7, Kanada weli ma aysan soo bandhigin qorshe dib-u-dejin cad oo qeexaya goorta iyo sida xaddidaadda ugu weyn ee socdaalka iyo xuduudaha looga saari doono, gaar ahaan socdaalayaasha si buuxda looga tallaalay waddamada shisheeye, iyo sida loo qaadan doono talooyinka Guddiga. . Maaddaama barnaamijyada tallaalku ay si dhakhso leh u kordhayaan isla markaana xukummadaha adduunka oo dhan ay macaamiisha iyo warshadaha siinayaan waddo cad oo horay loo socdo, waa inaan sidaas oo kale yeelnaa. Wadamada si guul leh u hirgaliya cilmi baaris iyo siyaasad karantiil ku saleysan iyo ilaalinta karantiilku ma ilaalin doono oo kaliya caafimaadka bulshada, waxay sidoo kale wadi doonaan dib u soo kabashada guud ee gudaha waxayna ka qaadan doonaan shaqooyin iyo maalgashi dalal aan sameyn. Waa inaan dhaqaaqnaa hadda ”, ayuu ku soo gabagabeeyey McNaney.